Pages - FileComplaintSomali
Home > File Complaint > File Complaint - Somali
Tusmooyinka Soo-gudbinta Ashtakada
Si aad u soo-gudbisid ashtako ka dhan ah qareen fadlan soo buuxi foomka ku lifaaqan oo u soo dir:
Ashtakoyinku waa iney ahaadaan qoraal ah, soona saxiixay qofka wax ashtakeenaya ayna kamid noqdaan nuqulka dukuminti kasta oo faalo ka bixinaysa ama taageraysa ashtakadaada. Ashtakoyinka
oo dhami waa in boostada la soo dhigaa, fakis ama gacanta lagu geeyo Xafiiska Eega Waajibaadka Saaran Qareennada.
Marka aan ashtakada kaa helno, waxaan qiyaasti labo todobaad gudahooda kuu soo diraynaa waraaq aan kuugu sheegeyno sida ashtakadaadi loo qaabilay. Xafiiskeena ama Xafiiska Guddiga Anshaxa Degmada (DEC), midkood, ayaa eegaya arrimaha u baahan baarista. Ashtakoyinka badankooda waxa marka hore loo gudbiya DEC. DEC ayaa magacawda qofka baara arrimahaas. Qofka baarista loo xilsaraay ayaa la soo xiriiraya qareenka iyo ashtakeekoodaha (haddii loo baahdo aqbaar dheeraad ah), wuxuuna fikradiisa uu u soo gudibnaya Maamulaha.
Xaaladaha oo dhan , waxaa nalaga rabaa inaan soo dirno nuqullada ashtakada u jeeda qareenka xitaa haddey dhacdo inaanan baarin ashtakada. Baaristu waxay qaadata ilaa saddex bilood ama ka badan. Qoraal ayaa qoraal ahaan kuugu soo sheegaya sida xaaladdu ay ku dhammaato.
Complaint Instructions - Somali
Complaint Form - Somali
Complaint Brochure - Somali